इपिएल : काठमाडौँसँगको हारसँगै पोखरा राइनोज प्रतियोगिताबाट बाहिरियो
२o७६ असार १ आइतबार / Sunday, June 16, 2019
२o७५ मङ्सिर २८ शुक्रबार
काठमाडौँ। एभरेष्ट प्रिमियर लिग (इपिएल) अन्तर्गत आजको खेलमा पोखरा राइनोज काठमाडौँ किंग्ससँग पराजित भएपछि लगातार चौथो खेलमा पराजित हुदै प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। पोखराले दिएको १६६ रन पछाएको काठमाडौँले १९.२ ओभरमा ५ विकेट गुमाउदै लक्ष्य पुरा गरेको थियो।
काठमाडौँका लागि केभिन ओ ब्रायनले ५४ रन बनाएका थिए भने कप्तान रोहन मुस्तफाले ४० रन बनाएका थिए। केभिनले ३५ बलमा ५४ रन बनाएका थिए। उनले ३ छक्का र ४ चौका हानेका थिए। त्यस्तै मुस्तफाले पनि उत्कृष्ट ब्याटिंग गर्दै ३१ बलमा ४० रन बनाएका थिए।
त्यस्तै काठमाडौँको जितमा सुब्रमनियन आनन्दले १७ बलमा २७ रन बनाएका थिए। त्यस्तै सागर पुनले १८ तथा अमित श्रेष्ठले ११ रन बनाएका थिए।
पोखराका बलर बिक्रम सोबले २ विकेट लिए भने सुशान भारी र शक्ति गौचनले एक एक विकेट लिए।
यसअघि टस हारेर पहिला ब्याटिंग गरेको पोखराले २० ओभरमा ६ विकेट गुमाएर १६५ रन बनाएको थियो। पोखराका लागि रिचार्ड लेभीले ३८ रन बनाए भने कप्तान किले कोत्जर र पाउल कोघलिनले ३७-३७ रन बनाएका थिए । त्यस्तै बिनोद भण्डारीले १७ तथा सुनिल धमला र राजेश पुलामी मगरले ९-९ रनको योगदान गरेका थिए ।
काठमाडौँ किंग्सका लागि बिक्रम भुसाल र केभिन ओ ब्रायनले २-२ विकेट लिएका थिए भने रोहन मुस्तफा र सम्सद सेखले एक एक विकेट लिएका थिए । काठमाडौँ किंग्सका नियमित कप्तान सोमपाल कामी घाइते भएपछि काठमाडौँको कप्तानी रोहन मुस्तफाले गरेका थिए ।
यो सँगै पोखरा इपिएलबाट बाहिरिने पहिलो टिम भएको छ। पोखराले प्रतियोगितामा खेलेका चारै खेलमा हार बेहोरेको छ। त्यस्तै काठमाडौँले ३ खेलमा २ मा जित हासिल गर्दै प्रतियोगितामा प्लेअफमा पुग्ने सम्भावना बाँकि नै छ।
आइपिएलका यी खेलाडी जसले टिमलाई जिताए र डुबाए !
काठमाडौँ । डेढ महिना लामो आइपिएल सकिएको छ । मुम्बई इण्डियन्सले रोमान्चक खेलमा चेन्नईमाथि एक रनको जित हासिल गर्दै चौथो पटक आइपिएलको उपाधि जित्यो । यस रिपोर्टमा आइपिएल फेन्चाईजले किनेका खेलाडीको
आइपिएलमा कसले कुन अवार्ड र कति रकम जिते ?
काठमाडौँ । आइपिएलको यस सिजन सकिएको छ । मुम्बई इण्डियन्सले चेन्नई सुपरकिंग्समाथि एक रनको सनसनीपूर्ण जित हासिल गर्दै चौथो पटक आइपिएल उपाधि जितेको छ । यस आइपिएलमा जित हासिल गर्दै मुम्बईले
आइपिएलको उपाधि मुम्बई इण्डियन्सले जित्यो
काठमाडौँ । इण्डियन्स प्रिमियर लिग (आइपिएल) को उपाधि मुम्बई इण्डियन्सले जितेको छ । गएराती सम्पन्न फाइनल खेलमा मुम्बईले चेन्नईलाई एक रनले पराजित गर्दै चौथो पटक आइपिएलको उपाधि जितेको छ । मुम्बईले
आइपिएल फाइनल : मुम्बईले चेन्नईलाई दियो १५० रनको लक्ष्य
काठमाडौँ । आइपिएल अन्तर्गत फाइनल खेलमा मुम्बई इण्डियन्सले चेन्नई सुपरकिंग्सलाई १५० रनको लक्ष्य दिएको छ । टस जितेर पहिला ब्याटिंग गरेको मुम्बईले २० ओभरमा ८ विकेट गुमाउदै १४९ रन बनाएको हो
राष्ट्र बैकले सोमबार आठ अर्ब २३ करोडको ट्रेजरी जारी गर्दै
गुठी विधेयकले कसैलाई मार परेको भए त्यसलाई हेरिन्छ – प्रधानमन्त्री ओली
अब सरकारका अरिंगाल मात्र सुरक्षित हुन्छन् – गगन थापा
बाजुरामा भिरबाट लडेर किशोरीको मृत्यु
देशका सातै प्रदेशमा बजेट ल्याइदै, कुन प्रदेशको बजेटको आकार कति ?
साताव्यापी युरोप भ्रमण पूरा गरी प्रधानमन्त्री ओली स्वदेश फिर्ता
गर्भ तुहिनुका कारण, लक्षण र संरक्षणका उपाय
दाङमा घरगोठमा आगलागी, १५ लाखको क्षति
डडेल्धुरामा ट्र्याक्टर दुर्घटना, एक शिक्षकको मृत्यु
गर्मी बढ्दैं गएपछि महोत्तरीका विद्यालय धमाधम बन्द
विश्वकपमा भारत-पाकिस्तान : अहिलेसम्मका ६ भिडन्तको यस्तो छ नालीबेली
भारत-अस्ट्रेलियाबीचको खेलमा बने र तोडिए केयौ रेकर्ड !
विश्वकपमा आज दुई खेल हुदै : जित्नै पर्ने अवस्थामा चारै टिम
मोहमद शाहजादको पिडा-‘म फिट हुदाहुदै पनि विश्वकप खेल्न दिइएन’
रामप्रसाद खनालको पञ्चेबाजाको गीत 'दुलाहा दुलही' सार्वजनिक
भारत-न्युजील्याण्डबीचको खेल रद्ध
रिषव पन्त इङल्याण्ड जादै
विश्वकपमा खेल नहुने बन्यो रेकर्ड, बर्षाले आजको खेल पनि रद्ध
'जापानका मेसी' रियल म्याड्रिडमा, के हो उनको बार्सिलोना कनेक्सन ?
लगातारको इन्जुरी र विवादले नेइमारको मुल्य घट्यो !